Amazfit GTR: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Xiaomi dia iray amin'ireo orinasa Namidy indrindra eo amin'ny sehatry ny azo anaovana akanjo. Amin'ny ampahany dia noho ny fehin-tànana misy azy, ny maha Smartband 4 anao farany tonga tany amin'ny tsena tamin'ny fomba ofisialy. Ny orinasa izao dia mamela antsika amin'ny famantaranandrony vaovao, izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Shina. Hitanay ny Amazfit GTR, izay mitondra andiana fiovana amin'ny orinasa.
Fantatr'i Xiaomi fa tsy maintsy ataon'izy ireo izany manatsara ity karazana fiambenana ity mba hitazonana ny fifaninanana lavitra. Izany no ataon'izy ireo amin'ity Amazfit GTR, izay mamela antsika amina endrika somary novaina. Ankoatr'izay, ny orinasa dia nanolotra andian-dahatsoratra vaovao ao aminy, izay azo antoka fa tena malaza.
Ny famantaranandro dia hanomboka amin'ny habe roa amin'ny tsena, mba hahafahan'ny mpampiasa misafidy izay mety indrindra amin'izy ireo amin'ity tranga ity. Toy ny mahazatra amin'ny famantaranandro marika marika sinoa, dia mahita tadiny sy kinova samihafa izahay. Ny tsirairay dia afaka mampifanaraka izany amin'ny tsiro sy ny fombany.
1 Famaritana Amazfit GTR
Famaritana Amazfit GTR
Ny marika sinoa dia manolotra famantaranandro mahatohitra, miaraka amin'ny fizakan-tena tsara sy tontonana AMOLED amin'ity tranga ity. Izy ireo dia nitahiry singa kilasika marobe tao amin'ity Amazfit GTR ity, na dia namela anay hiasa vaovao aza izy ireo, natao ho tian'ny mpampiasa mitady hanavao ny findainy. Ireto ny fiparitany:
Efijery modely 47 mm: 1,39 santimetatra AMOLED miaraka amin'ny Gorilla Glass
Efijery modely 42 mm: 1,2 santimetatra AMOLED miaraka amin'ny Gorilla Glass
Refy 47 mm: 47.2 x 47.2 x 10.75 mm
Refy 42mm: 42.6 x 42.6 x 9.2 mm
Batterie 47 mm: 410 mAh (faharetan'ny 24 andro)
Bateria 42mm: 195 mAh (faharetan'ny 12 andro)
Sensors: Compass, refesina pulsa, tsindry amin'ny atmosfera, hetsika, torimaso,
Ny hafa: fanoherana ny rano sy ny vovoka IP68, NFC
Rafitra miasa: Amazfit OS, mifanaraka amin'ny Android 5.0 sy iOS 10 na ambony
Tonga amin'ny habe roa ny Amazfit GTR, izay manana ny endriny mitovy, fa ny dial kosa dia miova mazava ny habeny. Noho izany, ny mpampiasa dia afaka misafidy ny kinova an'ity famataranandro ity izay heverin'izy ireo fa mety indrindra amin'ny raharahany. Raha ny maodely 47 mm dia tokony homarihina ambonin'ireo fizakantena lehibe rehetra homeny antsika, hatramin'ny 24 andro, noho ny fahaizan'ny bateria 410 mAh.
Tonga ny Amazfit GTR miaraka amin'ny NFC tafiditra, hahafahantsika mampiasa azy io handoavana vola amin'ny finday. Toy ny famantaranandro hafa dia tompon'andraikitra amin'ny fandrefesana ny fampihetseham-batana sy ny torimaso amin'ny fotoana rehetra izany. Azontsika ampiasaina izany rehefa miofana sy milalao fanatanjahan-tena. Azo ampiasaina amin'ny filomanosana ihany koa izy io, satria azontsika atsoboka ao anaty rano hatramin'ny 50 metatra, ka azontsika ampiasaina ao anaty pisinina tsy misy olana izany. Hisy kinova roa, ny iray mahazatra misy takela-by aliminiana ary ny endriny Iron Man, izay miaraka amina takelaka titanium, izay milanja kely kokoa ary somary lafo kokoa noho ilay mahazatra.
Ny Xiaomi Amazfit GTR dia efa amidy any Shina, amin'ny kinova rehetra. Amin'izao fotoana izao tsy mbola nisy fampahalalana nomena momba ny fanombohana azy any Eropa. Ka tsy maintsy miandry ny orinasa hizara angon-drakitra misimisy kokoa aminay izahay momba an'io. Saingy tsy tokony ho ela vao ho ofisialy any Espana.
Mahita kinova maromaro momba an'io izahay, arakaraka ny habeny indrindra. Ny tsirairay amin'izy ireo dia miaraka amin'ny vidiny any Shina, izay asehonay anao eto ambany:
Modely misy fonosana aluminium 42mm amin'ny vidiny 799 yuan (103 euro hanovana)
Ilay kinova misy fonosana aluminium 42mm sy tady hoditra dia mitentina 999 yuan (129 euro hanovana)
Ny maodely 47 mm miaraka amina tranga aluminium dia mitentina 999 yuan (129 euro novaina)
Ny fanontana manokana Iron Man 47mm vita amin'ny titanium dia mitentina 1399 yuan (180 euro hanovana)
Azo inoana fa ho hafa ny vidin-javatra amin'ny fanombohana any Eropa, angamba somary lafo kokoa. Na dia tsy maintsy miandry aza isika vao hahafantatra bebe kokoa momba ny fandefasana an'io Amazfit GTR any Eropa io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Amazfit GTR: rindrambaiko vaovao an'ny Xiaomi
Microsoft dia efa miasa amin'ny maizina maody ho an'ny Outlook
Ny Galaxy A40 dia mahazo Samsung Pay amin'ny fanavaozana vaovao